Tiger Woods anaghị arụ ọrụ na adịghị ike ya | Martech Zone
Tiger Woods anaghị arụ ọrụ na adịghị ike ya
Wednesday, May 9, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Gbanwee bụ ezigbo saịtị ma ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịhụ ya. IMHO, taa Ihe ngosi bụ ma e wezụga, n'agbanyeghị.
Do na-eche n'ezie na Tiger Woods na-edekọ ọtụtụ awa iji kwado ihe na-esiri ya ike? Flip Flippen kwuru chefuo maka ịchọpụta ike gị, kama ọ bụ adịghị ike gị na-egbochi gị imezu ihe kachasị mma gị.
Eziokwu bụ, Tiger Woods anaghị arụ ọrụ na adịghị ike ya ma ọlị. Achọpụtala ike ya ma na-etinye nnukwu oge na mbọ iji mezie ikike ndị ahụ.
Na 39 afọ na-eto eto, achọpụtara m ihe ole na ole na ndụ, mana ndị a bụ aka:
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ndị mmadụ ịgbanwe. Mana ọ gaghị esiri ndị mmadụ ike ịgbanwe - mgbe ụfọdụ naanị ihe ha chọrọ bụ nra nwayọọ.
Chọpụta ihe ị hụrụ n’anya na ihe ị kacha mma na… ma chọpụta otu esi enweta ego na ya. Gaghị enwe obi ụtọ karịa.
Ndị ndu na-elekwasị anya na adịghị ike gị abụghị ndị isi ma ọlị. Ezigbo ndị ndu na-aghọta ihe ndị mmadụ na-eme na ha na-agakọ ihe mgbaru ọsọ na ikike. Onweghi mmadu abuo abughi otu, ha ekwesighi, mgbe jiri ya tụnyere ibe gị.
Ndi ndu ndi choputara onye oru n’agha aghaghi agam nke oma n’ile onye oru a amara di uku site n’inye ha uzo ha g’eji n’iru ya, ma oburu na nke ahu apughi. Ọ bụ obi ọjọọ itinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ọdịda ma debe ha ebe ahụ.
Mgbe ị nyere ndị mmadụ ohere iji nwee ihe ịga nke ọma, ha agaghị enwe ike ịhapụ gị.
Flip na-ajụ, "Ọ bụrụ na ị kwenyere m, ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na i meghị ihe ahụ, zaa ajụjụ a: Gini bu ọnụọgụgụ ihe na - egbochi gị ịrụ ọrụ dị elu na mmezu ya?"
Flip chere na ọ bụ adịghị ike gị na-egbochi gị. Echeghị m na ọ bụ ma ọlị. Ekwenyere m na ihe otu ihe na - egbochi gị bụ na ịchọtaghị na ịchọta ụzọ iji jiri ike gị rụọ ọrụ.
Abụ m onye gọọlfụ crappy. Tiger Woods bụ nnukwu golfer. Ọ bụrụ na m ejiri ndụ m niile na-agba mbọ iji meziwanye egwuregwu golf m, agaghị m ahụ egwuregwu Tiger Woods. Agaghị m egbusi oge iji mee ka egwuregwu golf m ka mma - Aga m etinyekwu oge iji bụrụ nnukwu teknụzụ na onye ndụmọdụ. Nke ahụ bụ ihe m dị mma na, nke ahụ bụ ihe m hụrụ n'anya… na nke ahụ bụ nri ezinụlọ m. Achọrọ m ịchọpụta ihe ọ ga-ewe iji gbagoo egwuregwu m - ebe m ghọtara na amaala m na ya.
Ihe dị iche n'etiti 99.9% ziri ezi na 100% ziri ezi bụ naanị 0.1%. Mana ọ bụ na 0.1% nke chọrọ nlebara anya na mbọ iji merie. Mgbe ụfọdụ ọ nweghị ike imeri ya. Tiger Woods achọpụtawo ike ya nke mere ka ọ bịa 99.9% na ọ na-etinye ike ya niile na-anwa ịchịkwa nke ikpeazụ 0.1%. Ọ nwere ike iji oge ọrụ ya niile gbalịsie ike na ọ gaghị aga ebe ahụ n'ezie. Otú ọ dị, isi ihe ịga nke ọma ya bụ na ọ ghọtara ihe ike ya bụ ma nwee ntụkwasị obi na ya nwere ike ịkwatu onwe ya na 100%.
Otu n’ime ndị isi ọrụ m n’oge gara aga kwuru ya n’ụzọ dị mfe. Ngwurugwu agaghị adị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ hama na hama agaghị adị mma na spana. Y’oburu na ibu onye ndu, choputa ihe d’ime ngwa oru gi jiri ya mee ihe. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ naanị gị - chọpụta ma ị bụ mgbachi ma ọ bụ hama.
N’oge na-adịbeghị anya enwere m mmadụ ịnọdụ ala na, na-echegbu m, ọ mere ka m mara ihe m na-adịghị mma. Echere m na ọ na-atụ anya na m ga-arụrịta ụka ma ọ bụ nwee iwe. M ngwa ngwa mụmụọ ọnụ ọchị ma lelee ya anya sị, "Ekwenyere m na gị!". Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe m mere adịghị mma abụghị ihe m chọrọ ime, ọ bụghịkwa ihe m kwesịrị ime!
Flip na-ede, "Iji bụrụ ndị kachasị mma, anyị nwere ike? Ọ ga - abụrịrị? Mụta otu esi ewelata njide omume anyị ma na-eme ka ike anyị dị elu n'ihi na ezigbo ihe ịga nke ọma chọrọ ihe karịrị ikike na ikike."
M ga-atugharị okwu a ma kwuo sị, "Iji bụrụ nke kachasị mma, anyị nwere ike? Na ga - mụta ka esi bulie ike anyị elu n'ihi na ezigbo ihe ịga nke ọma chọrọ karịa ikike na ikike."
Ihe atụ bụ Michael Jordan, na-agbagha otu n'ime ndị mmeri kachasị elu n'oge anyị. Michael Jordan ruru n'egwuregwu ya ma chee na ya agaghị enwe ike. O mere ka ọ bụrụ 100% ya. Saa bere no ara mu na mihuu baseball. Ọ chọpụtara ngwa ngwa na ọ gaghị abụ nnukwu onye egwuregwu bọọlụ.
IMHO, ozugbo Michael Jordan chọpụtara na, ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo onye na-akụ bọl baseball, ọ gaghị abụ nnukwu ọkpụkpọ bezbọl. Ọ hapụrụ egwuregwu ahụ ọ hụrụ n'anya wee laghachi n'ike ya. Taa, Michael Jordan ka bụ onye mmeri. N'ịghọta na ike ya agaghịzi abụ basketball, ọ matala na azụmahịa bụ egwuregwu ọzọ ọ ga-eme, ma ọ na-arụ ọrụ na 0.1% iji kpọga ya n'elu.
Chọpụta ihe ndị ị na-emeta ma mee ka ihe kacha mma. Ekwela oge na adịghị ike gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike imeziwanye adịghị ike gị, ihe kacha mma ị nwere ike ịtụ anya ya bụ nkezi. Ọ dịghị onye chọrọ ịbụ nkezi.
Dabere na Wikipedia, Tiger Woods na-enwe obi ụtọ ịrụ ọrụ, ụgbọ mmiri, egwuregwu mmiri, ịkụ azụ, isi nri na ịgba ọsọ ụgbọ ala. You naghị eche na Tiger ga-agba ọsọ maka Mr. Universe n'oge na-adịghị anya, The Bass Masters, ma ọ bụ Indianapolis 500 n'oge na-adịghị anya, ị? Ee, echeghị m otú ahụ, ma.
Mee 9, 2007 na 11: 12 PM
CHAỊ! Ekwenyere m nke ukwuu na ihe ị dere. Naanị ihe m na-ekwetaghị bụ na ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe. Mana m ga-asị na ọ nwere ike isiri m ike ịgbanwe ma ọ dịrị gị mfe ịnọ n'ọnọdụ ọ bụla karịa ime mgbanwe mgbanwe mmetụta uche na nke uche na-achọ.
Mgbe m kwusịrị nke ahụ - ekwenyesiri m ike na ụlọ na ike. Mgbe ị na-anwa imeri adịghị ike, ọtụtụ oge karịa na itinye uche na adịghị ike na-abawanye ya (nsonaazụ a na-atụghị anya ya).
Mana iwuli elu na ike di ka SEO SEO. Ike gị na-amalite ibelata adịghị ike gị (dịka ezigbo ọdịnaya na njikọ).
N’ebe ọ bụla, ọmarịcha ọkwa. O mere ụbọchị m kpamkpam, kwughachiri ụfọdụ nkwenkwe bụ isi. Daalụ!
Mee 9, 2007 na 11: 35 PM
Ekwenyere m kpamkpam Doug - ọdịiche dị n'etiti ịdị mma na ihe na ịdị ukwuu bụ na ọ dịruo 0.1%. Enwere ọtụtụ mmadụ nwere ike iru akara 99.9%, mana ole na ole nwere ike imeri nke ikpeazụ 0.1%. Nke a bụ eziokwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ golf, foto, ma ọ bụ mmemme.
Mee 10, 2007 na 7: 57 AM
Nnukwu Post Doug, ekwenyere m na anyị ga-enwerịrị ọhụụ anyị, nsogbu bụ mgbe anyị na-arụ ọrụ maka ndị ọzọ, ha na-elekarị anya na nke ahụ na gị ma na-anwakarị ime ka adịghị ike gị gaa n'ihu ma gbalịa igwu iji mee ka ndị ahụ hara nha. na ike gị.
Ekwenyere m na nnukwu ndị isi na-elekwasị anya ma na-azụlite mmepe nke ike gị, mgbe m nwere ndị njikwa na echiche ahụ m mere nke ọma na mgbe m nwere ndị njikwa lekwasịrị anya na adịghị ike, enweghị m obi ụtọ.
Mee 11, 2007 na 2: 14 AM
Akwa post. Ekwenyere m na ọ dịghị mkpa imezi adịghị ike anyị. Enwere otutu ihe nke anyi adighi nma na anyi enweghi ike iji oge anyi mee ka ha di nma. Anyị kwesịrị ilekwasị anya na ike anyị.
Mee 14, 2007 na 8: 15 PM
Ekwenyere m na anyị kwesịrị ilekwasị anya na ike anyị na ọ bụghị na adịghị ike anyị. Ọrụ anyị nwere ike ịdị anyị mkpa ịkwalite ụfọdụ nsogbu anyị nwere ma anyị enweghị ike ileghara ha anya. Anyị kwesịrị ịtụle ọbụna obere ihe na ọnọdụ ụfọdụ.